Andre Villas-Boas: Tababare Jose Mourinho Waa Tababaraha Abid Ugu Fiican Adduunka.
Tababaraha kooxda Tottenham Andre Villas-Boas ayaa ku tilmaamay tababaraha Real Madrid Jose Mourinho tababarihii abid ugu fiicnaa caalamka.
35 jirkaan ayaa kula soo hoos shaqeeyay Mourinho Porto, Chelsea iyo Inter ka hor inta uusan isagana noqonin tababare buuxa.
Waxaana uu hoosta ka xariiqay muhiimada ay u leedahay casharadii uu ka soo bartay Mourinho.
“Mourinho malaha waa tababaraha ugu fiican abid” ayuu Andre Villas-Boas u yiriLancenet.
“Inaan la shaqeeyo Mourinho waxa ay aheyd qibrad qariib ah. Waa adag tahay in la helo qof sidiisa oo kale, xirfadle u ah, rabitaan badan uu ku jiro islamarkaana aqoon badan u leh ciyaarta.
“Nasiib wanaag, waxaa uu si fiican ii baray sida loo odaraso ciyaaraha iyo kooxaha. Sharaf ayay ii aheyd inaan isaga la shaqeeyo oo aan barto qaabkiisa tababarka.”
Lionel Messi Iyo Vicente Del Bosque Oo Loo Caleemo Saaray Boqorada Kubada Cagta Yurub.
Lionel Messi iyo Vicente del Bosque ayaa loo caleemo saaray boqorada kubada cagta Yurub, abaalmarinta sannadlaha ee ay bixiso majalada Uruguay ee El Pais Ovacion.
Abaalmarintan oo aheyd sannadkii 27aad ee la bixiyo ayaa waxaa u codeeya 250 joornaaliiste oo ka socda majalado, wargeysyo iyo wakaalado warar oo fadhigooda yahay America iyo Yurub.
Sannadkii afaraad oo isku xiga waxaa ku guuleystay laacibka ugu fiican xiddigaha Yurub ka ciyaara Lionel Messi, isagoo barbareeyay Zinedine Zidane oo isna abaalmarintan afar jeer ku guuleystay.
El Mundo Deportivo oo wax ka qortay abaalmarinta majalada reer Uruguay
Tababare Rafa Benitez Oo Doonaya Inay Chelsea Soo Gabagabeyso Heshiiska Demba Ba Isla Isbuucaan.
Tababare Rafa Benitez ayaa doonaya in Chelsea ay sida ugu dhaqasaha badan u soo xerogeliso weeraryahanka Newcastle Demba Ba. Sida aan ka soo xiganay The Sun.
Tababaraha ku meel gaarka ah Chelsea ayaa doonaya in heshiiska la soo gabagabeeyo isbuucaan, ka dib markii Chelsea ay ogolaatay inay bixiso heshiiska 7.5 milyan ginni ee lagu burburin karo qandaraaska Ba.
Weeraryahanka reer Senegal oo 27 jir ah ayaa wakiiladiisa waxa ay xalay kulan la qaateen madax ka socota Blues.
Benitez ayaa ka gaabsaday inuu wax ka yiraahdo heshiiska Demba Ba ka dib kulankii ay 2-1 kaga badiyeen Everton.
Waxa uu yiri: “Shaqadeyda waa inaan kooxda diyaariyo, agaasimayaasha kooxda ayaana i ogeysiin doona. Ba waxa uu u ciyaaraa koox kale, sidaasi darteed ma doonayo inaan ka hadlo.”
Ilaa shan xubnood oo qoyskiisa ka mid ah iyo wakiiladiisa ayaa wax ka doonaya lacagta uu Ba jeebka gashan doono ee 2.5 milyan ginni, lacagtaasoo ka go’i doonta 7.5ta milyan ginni ee heshiiskiisa lagu burburin karo.
Ilo ay soo xiganeyso The Sun ayaa yiri: “Chelsea waxa ay ku horeysaa saxiixa ciyaaryahan, laakiin inay qaabisho dhamaan dhinacyada kale ee heshiiska ku lugta leh ma ahan wax sahlan.”
Ba ayaa filan kara mushahar 80 ku ginni ah isbuucii isagoo laga yaabo inuu saxiixo heshiis seddex sanno iyo bar ah.
Arsenal Oo Muddo Labo Isbuuc Ah U Qabatay Inuu Theo Walcott Qandaraaska U Kordhiyo Kooxda.
Arsenal ayaa dooneysa inay mustaqbalka waqtiga dheer ee Theo Walcott ay ku xaqiijiyeen 15ka maalmood ee soo socda.
Madaxda kooxda ayaa lagu wadaa inay wajiga labaad oo wadahadalo rasmi ah la gasho Theo Walcott iyo wakiiladiisa 14ka maalmood ee ee socda.
Arsenal ayay sii kordheysaa niyadsamida ay ka qabto in heshiis la gaaro. Daily Mail ayaana sheegeysa in 23 jirkaan uu isaga laftiisa uu doonayo inuu joogo.
Laakiin heshiiskii ay Arsenal soo bandhigtay 28kii August ee ahaa 75 kun ginni isbuucii ayay tahay in wax lagu darro, halka Walcott uu sidoo kale doonayo in loo xaqiijiyo in si joogta ah looga ciyaarsiiyo booska gooldhaliyaha.
Xiddiga England ayaa doonaya lacag ku dhow 100 kun ginni isbuucii mushahar ah, laakiin waxaa la rumeysan yahay 85 kun ginni ama 90 kun ginni inay labada dhinacba ku qanci karaan.
Dhanka kale Arsenal ayaa isbuucaan u dhaqaaqi doonta inay la soo wareegto weeraryahanka da’da yar ee Crystal Palace Wilfried Zaha.
Gunners ayaana dooneysa inay kordhiso lacagtii ay markii hore doonayeen inay kula soo wareegaan da’ yarka England.
Arsenal ayaa markii hore qorsheysay inay 8 milyan ginni ku furaan dalabka 20 jirkaas, laakiin waxa ay haatan ka fiirsanayaa inay kordhiyaan lacagtaas si ay u hubiyaan soo xerogelinta Zaha.
Wesley Sneijder: Hadii Aan Inter Milan Ka Tago Bisha Janaayo, Cid Walba Ayay Dan Ugu Jirtaa.
Wesley Sneijder ayaa shaaca ka qaaday in hadii uu bisha Janaayo ka tago Inter Milan inay u fiican tahay cid walba.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaan ciyaarin muddo bilo ah, isagoo ka soo kabsanayay dhaawac sidoo kalena taribuunka loo saaray muran dhanka qandaraaskiisa ah. Kooxda ayaana dooneysa inuu dhimo mushaharka 6da milyan euro ee uu qaato sannadkii.
“Sida iska cad qof walba ayay u fiican tahay hadii aan baxo Janaayo” ayuu yiri Sneijder sida ay qortay jariirada ee Holland ee De Telegraaf.
“Hadii aysan taasi dhicin, markaas waan joogi doonaa. Waxaan qandaraas kula jiraa Inter ilaa 2015.”
Waxaa si joogta ah loola xiriirinayay kubadsameeyahan kooxo ay ka mid yihiin Manchester United, Tottenham, Manchester City, PSG iyo Anzhi.
Pepe: Waan Hubaa In Cristiano Ronaldo Uu Joogayo, Laakiin Ma Hubo Tababare Jose Mourinho.
Daafaca dhexe ee Real Madrid Pepe ayaa aaminsan in Cristiano Ronaldo uu qandaraaska u kordhin doono kooxda, laakiina ma uu hubo mustaqbalka tababare Jose Mourinho.
Xiddigii hore ee Manchester United ayaa la isla dhexmarayaa inuusan ku faraxsaneyn nolasha Bernabeu, waxaana dhawaan lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqayo kooxda Faransiiska ee PSG.
Kooxda Paris Siant-Germain ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay xiiseynayaan Mourinho, kaasoo waqti adag uu haatan soo wajahayo, iyadoo kooxdiisa ay La Liga 16 dhibcood ka danbeyso kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona.
“Cristiano waa uu ku faraxsan yahay Real Madrid, waxaana uu diirada saarayaa inuu kooxda caawiyo. Waan hubaa inuu qandaraaska kordhin doono” ayuu Pepe u sheegay Grande Area.
“Si kastaba, ma hubo waxa uu sameyn doono Mourinho. Ma jiraan wax la hubo. Kaliya tababaraha ayaa og waxa uu mustaqbalkiisa yahay, laakiin waxaan rajeynayaa inuu joogo sababtoo ah waan u baahanahay.”
Weeraryahanka Atletico Madrid Falcao Oo Sheegay Inuu Xilli Ciyaareedkan Ku Dhamaysan Doono Madrid
Weeraryahanka Atletico Madrid Radamel Falcao ayaa sheegay in uusan ogeyn waxa dhici doona kadib marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan iyadoo ay soo baxayeen warar sheegaya in uu doonayo in uu ka tago kooxdiisa inta uusan dhamaan xilli ciyaareedkan.
Falcao ayaa lala xiriiriyay qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee ka dhisan qaarada Yurub bilihii la soo dhaafay.
Hase ahaatee isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday Dubai ee ahayd Globe Soccer halkaa oo loogu magacaabay ciyaaryahanka sanadka ayaa waxa uu Falcao yiri:
“Saddex sano oo heshiis ah ayaan kula jiraa Atletico Madrid,” “Waxaan ku dhamaysan doonaa xilli ciyaareedkan kooxda aan ka tirsanahay mana garanayo kadib waxa dhici doona.
“Waxaan ka fekerayaa kooxdeyda oo kaliya, waxaan ogahay in ay warar la isla dhex marayo balse waxaan rajaynayaa in ay taasi saameyn igu yeelan. “Xaqiiqdii waan ku faraxsnahay la joogitaanka kooxda Atletico Madrid.
“Waxaa hubaal ah inaan horyaal kale ka ciyaari doona mustaqbalka balse hadda waxaan kula jiraa saddex sano ah kooxda Atletico.”
Arsene Wenger Oo Rajo Ka Muujiyey In Markale Uu Amaah Ugu Ciyaaro Thierry Henry
Tababare Arsene Wenger ayaa weli ka rajo qaba in Thierry Henry uu markale si amaah ah ugu ciyaaro kooxdiisii hore marka uu suuqa furmo.
Rajada ah in markiisii saddexaad uu u ciyaaro Arsenal ciyaaryahanka ugu goolasha badnaa ee soo mara kooxda ayaa waxa ay soo baxday bishii November, balse ciyaaryahanka ka tirsan koxoda New York Red Bulls ayaa hore u sheegay in aysan kooxda wax xiriir ah la samayn rajadana ay tahay mid aad u yar.
Hadda uu Wenger xaqiijiyay in ay suurtogal tahay in mar kale si amaah ah uu ugu ciyaaro Henry isagoo hadda tababarka la qaata kooxda.
Henry ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kulankiisii ugu horeysay markii uu toban daqiiqo garoonka ku jiray waxa uu u dhaliyay Arsenal goolkiisii koowaad.
Wenger ayaa waxa uu yiri isagoo ka hadlay arrimaha Henry: “Weli ma lumen xiisaha aan u qabo, waxana uu tababarka la qaataa kooxdaa hadda.
“Xiriirkeenu aad ayuu u wanaagsan yahay laakiin hadda,waxaan u malaynayaa in markiisii labaad uu kooxda si amaah ah ugu ciyaari doono.
“Weli kama rajo dhigin balse aniga iyo isaga kama wadahadal arrinkan.”
Arsenal ayaa lala xiriiriyay weeraryahano badan oo ay ka mid yihiin weeraryahanka Barcelona David Villa iyo kan Newcastle Demba Ba.
Mar si toos ah loo weydiiyay arrimaha Villa ayuu Wenger ku jawaabay: “Xiisaha aan u hayno ciyaaryahanada waa in ay ahaadaan sir hadda. Ma idiin sheegi karo magacyo.”
Arrinta Ba ayuu yiri: “Ma aha mid habboon inaan ka hadlo isaga. Haddii aad I weydiisid heshiis miyaad la saxiixatay?’waxaan idin leeyahay maya.”
Tababaraha PSG Ancelotti Oo Sheegay Inaysan Haysan Lacag Ay Ku Iibsan Karaan Ronaldo
Tababaraha kooxda ka dhisan dalka Faransiiska PSG Carlo Ancelotti ayaa sheegay inaysan dooneyn in xilliga kala iibsashada ciyaaryahanada ee bisha Janaayo ay soo iibsadaan weeraryahanka Real Madrid Cristiano Ronaldo sababo dhinaca dhaqaalaha ah, hase ahaatee waxa uu sheegay in kooxda Paris Saint-Germain ay tahay koox wanaagsan.
Weeraryahanka kooxda Real Madrid ayaan hore u sheegin inuu doonayo in uu isaga tago Santiago Bernabeu, laakiin saxaafada ayaa la xiriirinaysay laacibkan inuu doonayo in uu isaga tago Spain kadib markii uu sheegay in uusan ku faraxsanayn la joogida kooxda Real Madrid bishii September.
Tababarihii hore ee Chelsea oo kooxda uu macalinka u yahay ee PSG ay hayso hogaanka horyaalka Ligue 1 ayaa beeniyay in ciyaaryahanka reer Portuqal ee garabka ka ciyaara uu imanayo garoonka Parc des Princes mustaqbalka dhow.
“Ma jiro wax fursad ah oo uu halkan ku iman karo,” ayuu Ancelotti u sheegay La Stampa. “Lacagta aan heli karno ma aha mid wax goyn karta,tan ugu muhiimsan ayaa ah jacaylka kooxda uu u ciyaaro.
“Waa laacib awood weyn leh oo mar kasta ciyaari kara. Waan jeclaan lahaa in aan helo laacibiintaa oo kale, waana haystaa. Waxa aan ka aqristey wargeysyada wax micno ah malahan, weliba waxaan haystaa 30 ciyaaryahan oo uu ku jiro Lucas Moura markaa uma baahni wax kale.”
Magaca Xiddiga PSG Ibrahimovic Ee Zlatan Oo Lagu Daray Qaamuuska Dalka Sweden.
Xiddiga reer Sweden Zlatan Ibrahimovic ayaa magaciisa lagu daray qaamuuska Sweden, iyadoo ereyga “to Zlatan” ficil ahaan loo adeegsan doono.
Waana wixii ugu danbeeyey ee wadanka uu ku sharfo geesigooda kubada cagta, council-ka luqada Swedish-ka ayaana ansixiyay ereygaas ficil ahaanta loo adeegsan doono, madaama ay ku soo badatay isticmaala wadahadalka dadka reer Sweden marka ay ka hadlayaan fal tayo aan caadi aheyn leh.
Swedish-ka ayaa hingaada rasmiga ah ka soo qaatay France ‘zlataner’, iyadoo wax yar ka bedelay kana dhigay ‘zlatanera’, waxaana ay sidoo ku jirtaa luqada France.
Ibrahimovic ayaa haatan hogaaminaya gooldhalinta Ligue 1 isagoo u dhaliyay PSG 18 gool ilaa iyo haatan. Inkastoo uu yahay nin istustuska jecel, hadana waxa uu qirtay inuusan sii diyaarsan qaabka uu dabaaldego marka uu gooldhaliyo.
“Marka aan gooldhaliyo, ma aqaano sida aan u dabaaldegi doono, madaama aan haatan ahay gooldhaliyaha ugu sareeya horyaalka” ayuu u sheegay RMC Sport.
“Waqtiga ay ku soo aadeyso goolka waa wax walba, bey’ada, xaalada aan ku jiro. Waana dareen saafi ah.”